QODOBBADA WAXTARKA LEH EE CALEEMAHA (SALVIA), SIDA LOO ISTICMAALO DHIRTA DAAWADA DABIICIGA AH - SALVIA
Ugu Weyn Ee Salvia
Sage-ka si fiican loo yaqaan (ama salvia) waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee daawooyinka. Waxay ku faaftaa taariikhda hore, ka dibna qarniyadii dhexe, oo ahaa mid aad u caan ah oo loo yaqaan 'sage' oo si khaas ah loo koray sida geedka daawada. Sage waa meesha uu ku dhashay ee Mediterranean. Maanta waxaa lagu beeray dalal badan oo yurub ah (badiba Talyaaniga iyo koonfur-bari Yurub). Geedka dhirbaaxan waxaa laga heli karaa inta badan barafka, dhagaxa iyo carrada ciidda ah.
Geedku waa midka cagaaran ama, sida waxaa sidoo kale loo yaqaanaa, beerta - geed dheer ah 30-70 cm oo dherer ah. Waxaad u aqoonsan kartaa miro-buluug-buluuglaha iyo caraf udgoon. Sage waxay leedahay caraf udgoon iyo dhadhan qadhaadh ah oo qadhaadh leh. Caleemaha qulqulaya qoyaan caadi ahaan badhka xagaaga (laga bilaabo Maajo illaa badhtamaha-Luulyo). Waqtiga ugu wanaagsan ee la ururiyo waa muddada ka horeysa ubax; iyadoo ubax ah dhadhanka lumay. Maanta, qoyaanka cagaaran waxaa loo isticmaalaa meelo badan oo la xiriira daaweynta cudurrada kala duwan.
Sajka Cagaaran: Qaab-dhismeedka Beerka Dawada
Qaybaha ugu awoodda badan iyo firfircoon ee firfircoonida ayaa ah, sida caadiga ah, saliidda lagama maarmaanka ah. Sage caleemo qoyan waxaa ku jira 1-2.8% saliidda lagama maarmaanka ah. Laga bilaabo 0.5 illaa 1.0% saliidda waxaa laga helaa caleemaha iyo laamaha marka ay cusub yihiin, iyo qiyaastii seddex jeer ka badan markii sage ay qalalan tahay. Sage saliida lagama maarmaanka u leeyahay ur uris ah oo leh jaale huruud ah ama cagaaran. Wadar ahaan 28 qaybood ayaa laga helay qaabka loo yaqaan daawo ee loo yaqaan 'sage; Waxyaabaha ugu muhiimsani waa: 1,8-zineol, dhalatay, alfa iyo beta thujone.
Ma taqaanaa? Sage saliida lagama maarmaanka ah badanaaba been abuur ah adoo ku daraya thujoon oo ka soo baxa caleemaha bikrada ah (geedka qoryaha cas).
Geedka waxaa sidoo kale ku jira xaddi kala duwan oo ah limonene, camphor, camphene, pinen, beta-sitosterol (phytosterol), stigmasterol, carnosol (rosmanol), tannin, iyo xeryahooda kale.
Intaa waxaa dheer, saliida lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah walxaha kiimikaad ee soo socda: flavonoids, triterpenoids, alkaloids, caato. Caleemaha caleemaha waxaa ku jira saponins, niacin, nicotinamide, walxaha estrogenic, macmacaanka, fumaric, caffeic, iyo ashyaha phenolic, iyo sidoo kale acids organic (chlorogenic, ursolic, oleanolic, iyo kuwo kale). Sage waxa kale oo uu leeyahay diirada sare ee kalsiyum, potassium, magnesium, zinc, fitamiino C, B, fitamiin P iyo PP. Cawsku wuxuu kaloo ku jiraa qadhaadh, phytoncides, cirridka ciladeysan, asid formic. Xajmiyada dhirta waxaa ku jira kambalyo. Abuurka waxaa ku jira 25-30% saliidda dufanka leh.
Qodobo waxtar leh
Daawada, cagaarka digada waxaa loo isticmaalaa in ka yar inta badan garaaca, laakiin waxaa weli lagu yaqaan qaar ka mid ah bogsashada bogsashada. Waqtiyadii hore, dhirbaaxadu waxay ahayd dhir daaweyn oo muhiim ah (ilaha taariikhiga ah waxaa loo yaqaan "geedo sharaf leh"). Iyadoo lagu darayo miro, rosemary iyo lavender, sage ayaa door weyn ka ciyaaray dagaalka ka dhanka ah cudurka. Casiirka Sage ee geed isbonji la isticmaalay oo ka horjeeda jirradan marwalba. Cudurada kale ee loo isticmaalo geedo bukaan oo daaweyn ah ayaa ah maqaarka maqaarka, cuncunka, dhibaatooyinka kaadida, hurdada, oof-wareen, hargab iyo casiraad. Talooyin badan oo ku saabsan isticmaalka sage, horey loogu sharraxay qarniyadii dhexe, dabcan, weli waa muhiim. Qodobka ugu muhiimsan ee qaybaha waxtar leh ee ku jira sage, wuxuu ka dhigaa in ay wax ka qabato cudurro kala duwan oo laga yaabo in nin casri ah uu dhibsado.
Cagaarka Sage waxaa loo isticmaalaa maanta sida geedka daawo ee cudurada soo socda:
qabowga, ifilada, caabuqyada fayraska;
hyperhidrosis (dhidid xannibaad);
calool xanuun yar.
Marka lagu daaweeyo dhidid badan, dhaandhada ayaa si gaar ah caan u ah. Isticmaal joogto ah oo shaaha leh ee xajinta iyo xakamaynta dhididka jirka, gaar ahaan yareynta dhididka habeenkii ee haweenka muddada uu kudhacaayo. Waxaa macquul ah, tani waxaa lagu dhiirrigeliyaa monoterpenes iyo fareeshooyinka qaarkood oo ku jira caleemo qajaar ah. Shaaha ama faleebo dareenka beertu waa daawo qiimo leh oo loogu talogalay farxad dareemid, walaac iyo niyadjab; wuxuu dejiyaa nidaamka dareemayaasha, wuxuu yareynayaa welwelka, wuxuu yareeyaa madax xanuun. Xaaladaha noocaas ah, sage waxaa loo isticmaalaa yar yar, laakiin inta badan daawooyinka soo noqnoqda.
Sage-baarka ayaa wali la baadhi doonaa suurtagalnimada inay kor u qaadaan xusuusta iyo la dagaallanka cudurka Alzheimers. Sage waxaa lagu ogaaday inay tahay mid wax ku ool ah oo lagu daaweynayo qaababka fudud oo dhexdhexaad ah ee cudurka Alzheimers. Cagaarka Sage waxaa loo isticmaalaa daawo dhaqameed oo ka dhan ah macaanka diabeteska wadamo badan: saliida lagama maarmaanka ah waxay yareysaa gulukooska dhiigga. Waxaa intaa dheer, sage waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo nuujinta xad-dhaafka ah ee hooyooyinka kalkaaliyaha ah iyo sida loogu talagalay dhalmo la'aan. Phytoncides oo ku jirta saliidda shucaac waxay saameyn xun ku yeelan kartaa xitaa bacillus tubercle, sidaa daraadeed geedo badan ayaa waxtar u leh dhibaatooyinka kasta ee habka neefsiga. Geedka ayaa sidoo kale ka caawiya qaamo-qashiir.
Sidee loo isticmaalaa daawada dabiiciga ah?
Cawska Sage wuxuu leeyahay sifooyin faa'iido leh sida daawooyinka, laakiin ka hooseysa awoodda saameynta daaweynta. Sajinta goobta ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dhaqameed (sida shaah geedeed, faleebo ama decoction). Sage waxaa badanaa sakhraansan sida beddelka shaaha dhaqameed. Iyada oo la raacayo talooyinka caafimaadka waa in la cunaa wax ka badan seddex koob oo ah garaashka maalintii. Cunto cusub ayaa laga heli karaa farmasiyada, dukaamada ama suuqa. Tayada waxay ku kala duwan tahay kala duwanaanshaha. Kuwa ugu fiican waa dhirta oo leh caleemo waaweyn iyo horeba wax yar oo qoryo leh. Tilmaamyadani waxay soo jeedinayaan in sage aan lagu daaweynin Bacriminta kiimikada.
Cunnooyinka loogu talagalay isticmaalka sage ee caabuqa fayraska iyo hargabka
Sababtoo ah walxo badan oo qiimo leh oo ku jira saliidka lagama maarmaanka u ah geedo aromatic ah, sage ayaa bogsashada guryaha bakteeriyada. Geedhu waxay ka caawisaa qabowga, dhuun xanuun, hargab, cune xanuun iyo jadeeco. Sage wuxuu leeyahay antiviral, antipyretic, saamaynta durida. Si loo dhammeeyo, waxaa loo isticmaalaa qaab decoction ama tincture ee caleemaha, iyo sidoo kale ku shub saliid muhiimadda u ah cabitaannada. Gobollada meesha shahwada duurjoogta ah ay koraan, caleemaha waxaa la kariyaa khal iyo waxa loo isticmaalaa sida tonic.
Waa muhiim! Fadlan ogow in aadan qaadan karin dareen marxaladaha hore ee ifilada. Xaqiiqdu waxay tahay in dhirtu dhoobo horay u sii dillaacday xuubka sare ee maskaxda ee xitaa wax ka badan. Natiijo ahaan, waxaa suurtagal ah in aan la hagaajin, laakiin sii xumeyneysa qufaca.
Recipe for angina, oo leh jeermiska, oo leh boogo ku yaal geesaha afka (tincture ee caleemaha caleenta for gargling). Kaliya ku shub dhowr caleemood oo cusub oo caws leh oo leh galaas biyo kulul oo u diyaari laba daqiiqo. Ka hor intaadan bilaabin qaawan, ka saar dhammaan caleemo ka soo decoction. Leaves la qaadi karaa ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale la qalajiyey (jabay). Xaaladdan oo kale, waa in ay ku buufiyaan biyo karkaraya (duuban) ugu yaraan 2 saacadood, ka dibna faleebo waa in la sifeeyaa.
Recipe for xabeeb iyo qufac. Daawo saliid asaasiga ah ee sageedka ayaa lagu daraa biyo diirran, ka dibna biyo raaci.
Qodobbo ku samee bukaanka dabaysha gudaha ee jirka (infakshannada fayraska ee kala duwan). Ku shub caleemo cusub oo caleemo leh karkariyo ama caano kulul. Maraq ayaa loo oggol yahay in uu ku faafo, cabo kulul ka hor wakhtiga jiifka.
Sidee loo dalbadaa dhirta cagaarka si loo daweeyo xubnaha maskaxda mindhicirka
Tannins iyo qadhaadh ee dhirta cagaaran si ay u hagaajiyaan dheefshiidka. Sage ayaa loo qaataa si loo daweeyo cudurada caloosha ee kala duwan, oo leh boogta sambabada, ee daaweynta qulqulka (xanaaq badan). Warshadu waxay leedahay firfircoonida antispasmodic iyo ficillada sida carminative (loo isticmaalo ka soo horjeeda mareenka caloosha iyo mindhicirka), waxay bixisaa difaac ka dhan ah shubanka. Sage waxaa loo tixgeliyaa daaweyn wax ku ool ah oo loogu talagalay xumad fara badan; Waxay leedahay saameyn daweyn oo ku saabsan colitis, gastritis, cholecystitis, cudurrada gallbladder iyo kelyaha. Geedhu sidoo kale waxay taageertaa beerka waxaana loo isticmaalaa in lagu kordhiyo shaqadooda.
Isku qurxin leh sage for inflammation of mareenka caloosha iyo mindhicirka: 2 qaado oo ah caleemo la jajabiyey soo diyaarka laba koob oo biyo karkaraya, ku adkeyso 30 daqiiqo, cadaadis, cab cabir 1 qaado oo 2 saacadoodba mar.
Ma taqaanaa? Dalka Shiinaha, halkii laga dooran lahaa shaaha caadiga ah waxay doorbidaan dib-u-hagaajinta. Shiinuhu waxay ka mahadcelinayaan geedaha xayawaanka ee sifooyinka bogsoodka ah, maadaama ay cuntadu mararka qaarkood aad u jilicsan tahay oo ay culus tahay caloosha.
Isticmaalka boodhka cagaaran si loogu daaweeyo cudurrada maqaarka
Faleebo qoyan ee digriiga ayaa ah daaweyn aad u fiican oo loogu talagalay daaweynta adag ee cudurrada maqaarka kala duwan:
nabarrada nudaha ah.
Sababta keenta bogsashada (anti-inflammatory iyo antibacterial) ee sage, geedkaani wuxuu ka caawiyaa bogsashada nabarrada iyo dib u soocinta maqaarka, waxay yareysaa maqaarka maqaarka iyo cuncunka. Sage waxaa sidoo kale loo isticmaalaa qaniinyada cayayaanka iyo caabuqyada maqaarka ee kala duwan. Warshadda waxaa lagu daraa maaddooyinka dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Sage waxaa loo isticmaalaa in lagu xanaaneeyo maqaarka wejiga, waxay faa'iido u tahay maaddada lafdhaqaaqa ah iyo finanka maqaarka. Waxay nadiifisaa maqaarkeena, waxay la dagaallantaa bakteeriyada iyo finanku, waxay yareeysaa barar, waxay gacan ka geysataa sidii loo xakameyn lahaa sebantada xad-dhaafka ah.
Tijaabinta tufaaxa ee maqaarka saliid leh (laga bilaabo caleemo iyo ubax qoyan). Diyaarso faleebo laga soo qaado lafaha cawska qallalan iyo 1/2 koob oo biyo nadiifa ah. Ka dib markii la qaboojiyo, cadaadin faleebo, ku dar 1: 1 tufaax dabiiciga ah cider tufaaxa iyo tirtir wejigaaga laba jeer maalintii.
Goobaha qurxinta ah ee laga isticmaalo meesha wali la isticmaalo waa xannaanada timaha. Sida daryeelka maqaarka, wajiga waxaa lagu isticmaalaa shaambada saliidda leh. Wareegida heesta waxay si dhaqso ah u tirtiri doontaa dhibaatada dhuxusha iyo lafdhaqaaqa.
Ma taqaanaa? Salvia way madoobaan kartaa timaha. Noocyada Sage waxaa badanaa loo isticmaalaa sida dabiiciga ah, habka dabiiciga ah ee dheehidda ciriiriga.
Sida loo isticmaalo dhirta qoyaanka digaagga
Waxaa la yiraahdaa isticmaalka boodhka cagaaran ee daaweynta cudurrada bararka ee afka qalalan, iyo sidoo kale dhibaatooyinka ilkaha ee kala duwan. Ujeedadaas awgeed, diyaargarow gaar ah ayaa laga sameeyaa caleemo ama xayawaanka laga soo saaro. Sida kor ku xusan, digsiga beeraha wuxuu leeyahay hanti-barar, anti-fedtig iyo qalab deggan. Sababtan awgeed, caday ilko badani waxay ku jirtaa midka mid ah maaddooyinka. Dalka Mareykanka, geedkan ayaa weli lagu qiimeeyaa waxaana loo isticmaalaa daawada rasmiga ah.
Isku qurxin si aad uga taxadarto afkaaga. Buuxi caleemaha cusub biyo kulul la kariyey. U oggolow in faleebo si aad u yar qaboojiso, ka dibna sii wadi biyo raacinta. Xoqitaanka si joogta ah leh xajinta wuxuu ka caawiyaa daaweynta dhaawacyada afka ee afka. Kala duritaanka sidoo kale wuxuu u fiican yahay cirridka dhiigga iyo ka hortagga socodka calyada.
Faleebo loogu nadiifiyo, oo laga sameeyay isku dar ah iskeelka, rosemary, caleen, iyo lagu kariyey khamri ama biyo malab, wuxuu kaa badbaadin karaa wax kasta oo ka yimaada godka afka. Caleemaha qoyan ee cusub ayaa inta badan xoqaya ilkahooda, iyaga oo nadiifinaya iyo xoojinta cirridka. Sidaa daraadeed, geedkan geedahaas leh ee fayadhowrka ah wuxuu noqon doonaa daaweyn dabiici ah oo ku saabsan daaweynta cudurrada iyo cudurada saameynaya afka iyo ilkaha.
Beeraha digada: Xaddidaadda
Sage, marka lagu daro guryaha waxtarka leh, waxaa jira qaar ka hortag ah. Daryeelka waa in la siiyaa haweenka uurka leh iyo haweenka inta lagu jiro nuujinta. Sage waxaa ku jira xeryaha sida estrogen-u eg oo si xun u saameeya uurka uurka waxayna joojin kartaa socodka caanaha hooyooyinka kalkaaliyaha ah. Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad u isticmaasho garaashka tiro badan oo carruur ah. Ilaa hadda sida la og yahay, isticmaalka dhexdhexaadka ah ee taxanaha, ma jiraan wax war ah oo ku saabsan fal-celin xumo.
Waa muhiim! Xuubka cagaaran wuxuu leeyahay diirada sare ee thujone, taas oo ah sun ah qiyaaso badan. Sidaa darteed, isticmaalka garaacis xad-dhaaf ah wuxuu saameyn xun ku yeelan karaa caafimaadka.
Dareenka xun. Dhibaatooyinka kale ee salvia-ka ee dheeraadka ah waxaa ka mid ah afka qalalan, stomatitis iyo cuncun degaanka. Tijaabooyinka waxay muujinayaan in sage saliida muhiimka ah ay kordhin karto cadaadiska dhiigga ee dadka qaba dhiig-karka. Haddii aad qabto wax khatar ah ama aad qaadatid daawooyin kale, geedo, daawooyin, waa inaad la tashataa takhtar u qalma inta aadan bilaabin daaweyn cusub.
Sidaa darteed, tixgelinta cagaarka cagaaran, iyo sidoo kale sharaxaad ka mid ah hantida faa'iido leh ee geedkan, wuxuu sharxayaa caan ka mid ah dareenka sida daaweyn dabiici ah. Inkasta oo su'aashu tahay waxtarka filimka beeruhu uu u furan yahay wadahadalka, waxaa jira caddayn tijaabo ah oo ku saabsan saamaynta uu ku leeyahay antibiyootigga, iyo sidoo kale antifungal, antispasmodic iyo tonic. Geedkan waxaa lagula taliyaa hal qaab ama mid kale oo aan ka jirin wax cudur ah waxaana loo isticmaalaa sida tonic guud. Dhakhaatiirta iyo cuntooyinka labaduba waxay xusaan saamaynta bogsoodka ah ee ay ku kacayaan jirkeena.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Salvia 2020